के तपाई लेखक बन्‍न चाहनुहुन्छ ?
अन्नपूर्ण टुडे आइतवार, भाद्र २५, २०७४
लेख्‍ने इच्छा कसको पो हुँदैन र ? तर, सबैको कलममा जादु हुँदैन् । राम्रो लेख लेख्न द न्युयोर्क टाइम्सले सुझाएका टिप्सको भावानुवाद :
* पाठकले तुरुन्तै कुनै लेख नपढ्ने निर्णय गर्न सक्छ । त्यसैले शुरुदेखि नै प्रत्येक वाक्य उसको ध्यान तान्ने हुनुपर्छ । लेखमा शीर्षकको महत्व र त्यो अहिलेको समयमा किन सान्दर्भिक छ भन्ने ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
* पत्रिकाको विचार पृष्ठका लेखका पाठक भनेका सामान्य मानिस हुन् । पाठकहरू ती लेख पढेर केही कुरा सिक्न÷जान्न उत्सुक हुन्छन् । त्यसैले लेख तिनीहरूले बुझ्ने सरल भाषामा लेख्नुपर्छ । विशेष ज्ञान नभएका धेरै मानिसले बुझ्ने भाषामा ध्यान दिनुपर्छ । लेख कुनै विषयका विशेषज्ञका लागि लेखिने होइन । त्यसैले विशेषज्ञले मात्र बुझ्ने प्राविधिक शब्द राखेर र प्रतिस्पर्धी बौद्धिकलाई देखाउन नलेख्नु राम्रो हुन्छ । कुनै महत्वपूर्ण ओहोदामा भएका मानिसहरूलाई फुर्काउने उद्देश्यका लागि मात्रै लेखिएका लेख पनि राम्रा होइनन् ।
* विचार पृष्ठमा लेखिने लेखको उद्देश्य विचार नै अभिव्यक्त गर्नु हो । यसको उद्देश्य समाचार विश्लेषण गर्नु वा वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू दाँज्नु पनि होइन । ह्यारी टुम्यानले एक पटक एउटै मात्र दृष्टिकोण भएको अर्थशास्त्री खोज्नुपर्छ कि भनेका थिए । सल्लाह दिन राखिएका अर्थशास्त्रीले फलानाले यस्तो भनेको छ र ढिस्कानाको यस्तो विचार छभन्दा उनी अलमलमा परेका रहेछन् ।
* लेख्नका लागि विज्ञता त चाहिन्छ नै । पाठकले कुनै विषयका लेख पढ्दा त्यो विषयमा विज्ञता वा विशेष अनुभव भएका लेखकलाई पढ्न चाहन्छन् । यदि विशेषज्ञता छैन भने लेखकलाई जतिसुकै रुचि लाग्ने विषय भए पनि नलेखेको राम्रो हुन्छ । विचार पृष्ठका सम्पादकहरू त्यस्ता लेखकको खोजीमा हुन्छन् जसको कुनै विषयमा विज्ञता छ र उनीहरू सामान्य मानिसलाई अनौठो लाग्ने कुराहरूलाई चित्तबुझ्दो गरी तर्क राख्न सक्छन् । जस्तैः आणविक शक्तिको समर्थन गर्ने वातावरणविद्, तेस्रोलिंगीहरूलाई समर्थन गर्ने दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ र सकारात्मक विभेदको विरोध गर्ने अफ्रिकी अमेरिकी विद्वानका तर्क पढ्न पाठकहरू उत्साहित हुन सक्छन् ।
* कुनै विषयमा विज्ञता नभएका र नाम चर्चामा नआएका लेखकको हकमा भने ८०–२० को नियम लगाउनु ठीक हुन्छ । अर्थात् लेखमा ८० जानकारी र २० प्रतिशत विचार हुन सक्छ ।
* विचार लेख पत्रिकाका स्तम्भकारले लेख्ने शैलीमा लेख्नु हुँदैन । स्तम्भकार सबै विषयहरूमा विसंगतिपूर्ण शैलीमा लेख्छन् । तिनीहरूले विचार दिनेभन्दा पनि पाठकहरूका अगाडि ‘प्रस्तुति’ दिने गर्छन् । विचार लेख लेख्‍ने लेखक पाठकहरुलाइ जानकारी दिन चाहने विशेषज्ञ हुनुपर्छ ।
* सकेसम्म कर्मवाच्य प्रयोग नगरेकै राम्रो । कर्तृवाच्यमा सीधा र स्पष्ट वाक्य लेख्न राम्रो हुन्छ । अर्थहीन र अनुमान जनाउने ‘यस्तो देखिन्छ’, ‘यस्तो बुझिन्छ’, जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ । लेखमा आत्मविश्वास झल्किनुपर्छ । लेखमा प्रतिरक्षा गरेको जस्तो र अति आत्मविश्वास नझल्किएको राम्रो हुन्छ ।
* लेखमा व्यक्त गरिने विचारको विपक्षमा आउनसक्ने तर्कहरू अनुमान गर्न सक्नु राम्रो लेखकको गुण हो । विपक्षमा आउन सक्ने बलिया तर्कहरूको पूर्वानुमान गरेर पहिले नै उत्तर दिएको विचार लेख उत्कृष्ट हो । यसले लेखमा उठाइएको विचारलाई बलियो बनाउँछ र पाठकहरूको सम्मान पाउँछ ।
* सानाभन्दा साना पक्षलाई मिहिनेतपूर्वक हेर्नुपर्छ । प्रत्येक वाक्य पढ्नुपर्छ । आवाजै निकालेर पनि पढ्न सकिन्छ । ती प्रत्येक वाक्य सत्य हुन् कि होइनन् विचार गनुपर्छ । लेखका प्रत्येक शब्द आवश्यक भएकैले प्रयोग भएका हुन् भन्ने निश्चित गरिनुपर्छ । लेखमा प्रयोग भएका तथ्य, भनाइ, मिति र हिज्जे ठीक छन् भन्ने निश्चित गरिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ हिज्जे गाह्रो हुन्छ । जस्तैः मिखाइल गोर्वाचोभ लेख्न गाह्रो होला । तर, पछि भूलसुधार गर्नुभन्दा त शुरुमा लेख्दा नै अप्ठेरो भए पनि शुद्ध लेख्नु राम्रो हुन्छ ।
* वाक्यहरू सकेसम्म छोटा र खँदिला बनाउनुपर्छ ।
* अखबार आफ्ना पाठकहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको हुन्छ । लेख्नुभन्दा अगाडि पत्रिकामा योभन्दा पहिले यो विषयमा कहिले लेखिएको थियो र यो लेखले यो विषयमा बहसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ सोच्नुपर्छ ।
* बारम्बार दोहोरिएर अर्थ गुमाइसकेका सामान्य वाक्यहरू नदोर्‍याउन राम्रो हुन्छ । विचारपृष्ठका सम्पादकहरूले यस्ता अनावश्यक शब्द र वाक्यहरू चामल र भुस छुट्याएझैं छुट्याइहाल्छन् । यस्ता शब्दजालभित्र लुकेका झुट पनि उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् ।
* लेख असाध्यै सजिलो बनाउन खोज्नु पनि गल्ती हो । सात सय शब्दको लेख लेख्ने हो भने पहिलो ड्राफ्ट पक्कै लामो हुनुपर्छ । त्यसलाई काट्दै छाँट्दै छोटो बनाउनुपर्छ ।
* सम्पादक सधैं सही नै हुन्छन् । लेखकलाई असाध्यै राम्रा लागेका र लेखकले सन्तुष्ट अनुभव गरेका वाक्य र अनुच्छेद नै सम्पादकले काट्न सक्छन् । सम्पादकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । उसको सम्पादन गर्ने क्षमतामा शंका गर्ने र लेखहरू छाप्न अनुनय विनय गर्नु हुँदैन । सम्पादकले सम्पादन गरेर राम्रो लेख बनाइदिइहाल्छन् नि भनेर जस्तो पायो त्यस्तै लेख दिनु हुँदैन ।
* लेख्न चाहनेहरूलाई शुभकामना, तर राम्रो लेखले भन्दा पनि सचेत छनोटहरूमा भर पर्छ । राम्रो (विषय) छनोट गर्नुपर्छ ।